छापामारको छोरो भन्छ ‘म विप्लव माओवादी हुँ सर’ – Ranga Pati
Posted on September 28, 2019 September 28, 2019 Author rangapati Comment(0)
भुइँमा खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दै मेरो बडिगार्डले भन्यो, ‘सर छापामारको छोरो भन्ने हजुरलाई भेट्न चाहन्छ  । ’‘हँ… को रे ?’ कता कता सुनेझैं, महसुस गरिरहेझैं लाग्यो मलाई यो नाम  ।
‘छापामारको छोरो सर ।’ मेरो बडिगार्डले नाम दोहो‌र्‍यायो । ‘छापामारको छोरो !!’ मेरो स्वरमा किञ्चित आश्चर्य थियो ।
‘हो सर ! छापामारको छोरो ।’ आफ्नो बोलीमा मेरो गार्ड आश्वस्त देखिन्थ्यो । ‘कहाँ छ त्यो ?’ मैले गार्डको अनुहारमा हेर्दै भने । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छ सर ।’ छाती तनक्क तन्काउँदै गार्डले फेरि सलाम ठोक्दै भन्यो । ऊ आफ्नो अनुहारमा आत्मविश्वासको भाव ल्याउने प्रयास गरिरहेको थियो ।
’प्रहरीको हिरासतमा छ ऊ ?’ मैले अचम्म मान्दै गार्डको अनुहारमा हेरें । ‘हजुर सर । उसलाई प्रहरीले पक्रेर ल्याएको तीन दिन भयो । ऊ विप्लव माओवादी हो सर । तर खोइ किन हो आफूलाई छापामारको छोरो भन्दोरैछ हजुर ।’
‘त्यो फुच्चे छापामारको छोरो अहिले कहाँ होला ? उसको बाबु र आमा के गर्दै होलान् ? सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेर जीवन गुमाएका रहेनछन् भने सायद जीवितै होलान् । दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपश्चात् देशमा शान्ति बहाल भयो ।नागरिकले नयाँ संविधान पाए । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू भयो । सायद उसका बाबुआमाले पनि माओवादी जनयुद्धमा गरेको योगदानस्वरूप पक्कै उपल्लो पद र पहुँच भेट्टाए होलान् । छापामारको छोरोको बाबु केन्द्र अथवा प्रदेश सरकारको मन्त्री नै पो बनिसक्यो कि ! छापामारको त्यो फुच्चे छोरो पनि पच्चीस छब्बीस वर्षको लक्का जवान भइसक्यो होला । ऊ पनि आफ्नो बाबुको पीएसीए बनेर जनयुद्धको बेला देखेका सपनाहरू साकार पारिरहेको पो छ कि !’ मेरो दिमागमा यिनै कुराहरू खेलिरहे । मेरो मन छापामारको छोरोको स्मृतिमा द्रवित बनिरहेको थियो ।
‘अहँ …!’ मैले सम्झेसम्म उसलाई न त कहिले देखेको थिएँ न त हाम्रो कहिले भेट नै भएको थियो ।
‘ल्याऊ ।’ मैले भनें । छापामारको छोरोतिर हेर्दै मैले भनें, ‘कुर्सीमा बस ।’ ‘धन्यवाद सर ।’ हात जोर्दै ऊ कुर्सीमा बस्यो । ‘हतकडी खोलिदेऊ ।’ प्रहरीलाई आदेश दिएँ । प्रहरीले हतकडी खोलिदियो ।
उसले सुनाएको कथा यस्तो थियो …!
‘…त्यसपछि मलाई लाग्यो जुन सपना देखेर मेरा बा जनयुद्धमा होमिनुभएको थियो, त्यो सपना त तुरियो । त्यसभन्दा पनि पीडादायक दृश्यहरू देखेर म कहालिएँ । हामीलाई मुक्तिको सपना देखाउने आदरणीय कामरेडहरू दलाल, गल्लावाल र ठेक्कावालमा रूपान्तरण हुनुभयो । मेरा बाले देशमा ठेकेदारतन्त्र ल्याउन बन्दुक उठाएका थिएनन् ।
कथा छापामारको छोरो: कान्तिपुरबाट साभार
यमुना अर्याल (काफ्ले) केही दिनअघि बिहान रत्नपार्कमा टेम्पोबाट ओर्लिएर कार्यालयतर्फ जाँदै थिएँ। रत्नपार्कको गेटनिरको भुइँमा सबैजसो दैनिक पत्रपत्रिकाहरू राखिएका थिए लहरै। पत्रिका पढ्नेमध्ये पाँचसात जना अलि पाकै उमेरका पुरूषहरू थिए। उनिहरूले निकै चाखलाग्दा कुरा गरेरै होला गाडी कुर्नेहरू पनि गाडी कटिसक्दासम्म पनि कुरा सुनेरै उभिएका थिए। मेरो ध्यान पनि उक्त भीडले तान्यो। हुन त रत्नपार्कमा […]
कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता गर्न संयुक्त सङ्घर्षमा जान प्रकाण्डको अपिल
Posted on December 4, 2019 December 4, 2019 Author rangapati
काठमाडौँ : भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहित महाकाली नदीपूर्वका भूभागहरू आफ्नो देशको नक्सामा गाभेर उक्त नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाली जनता आन्दोलित भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि भारतका कूटनीतिक अखडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाली मूलका विदेशी नागरिक र नेपालका शुभचिन्तक देश तथा बुद्धिजीवीले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका पक्षमा साथ–सहयोग दिइरहेका छन् […]
दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् ।सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक […]
असोज ११ गते शनिबार (सेप्टेम्बर १२ तारिख)को राशिअनुसार तपाईंको भाग्य हेर्नुहोस